प्रधानमन्त्री इमरानले ३ अर्ब डलर पाउने आशा लिएर साउदी अरब पुगे आशा पाए तर अब रित्तै हुँदा पाकिस्तान सरकार तनावमा - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय प्रधानमन्त्री इमरानले ३ अर्ब डलर पाउने आशा लिएर साउदी अरब पुगे आशा...
साउदी अरबले पाकिस्तानलाई अर्बौं डलर ऋण दिने वाचा गरेको थियो तर अहिलेसम्म त्यो रकम दिएको छैन । इमरान सरकारले भर्खरै भनेका छ कि उनीहरूसँग देश चलाउन पैसा छैन म देश चलाउन असमर्थ भइ सके ।
काठमाडौं । बढ्दो वैदेशिक ऋणका कारण पाकिस्तान सरकारसँग देश चलाउन पैसा नभएको देशका प्रधानमन्त्री इमरान खान आफैले भनेका छन् । अहिले देशका समस्याहरु घट्नुको साटो निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । हरेक पटक मुस्किलले पाकिस्तानलाई बाहिर निकाल्ने साउदी अरबले पनि हात फिर्ता गरिरहेको छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री इमरान खानले ३ अर्ब डलर पाउने आशा लिएर साउदी अरब गएका थिए । उनको भ्रमण लगत्तै साउदी अरेबियाबाट पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म पाकिस्तानले त्यो रकम प्राप्त गरेको छैन ।
यस बाहेक पाकिस्तानले १।२ अर्ब डलरको तेल ऋण पनि मागेको थियो, जुन पाकिस्त्यतानलाई दिइएन । सरकारको खिल्ली उडाएको देखेर पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फवाद चौधरीले सायद यसै साता राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले नगद रिजर्भ उपलब्ध गराउने बताएका छन् । एउटा अचम्मको कुरा के छ भने पाकिस्तानले यो रकममा ३।२ प्रतिशतको दरले वार्षिक ब्याज जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस विषयमा पाकिस्तानी सेना र सरकार दुवै मौन बसेका छन् । तर पर्दा पछाडि अर्कै खेल चलिरहेको छ ।
यो सम्झौता ठीक छैन !
युट्युबमा उपस्थित पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठीले यो सम्झौता ठीक नभएको बताएका छन् । यस्ता धेरै कुराहरुबाट यो पुष्टि हुन्छ ।इमरान २३ अक्टोबरमा साउदी अरबको भ्रमणमा गएका थिए र त्यसपछि २६ अक्टोबरमा फर्किएका थिए । तर यस अवधिमा दुवै देशका तर्फबाट सम्झौताबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। पाकिस्तानी मिडियाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई धार्मिक भ्रमण ९साउदी अरब पाकिस्तान हेल्प० नाम दिएको छ । तर, उनी फर्किएको ६ दिनपछि साउदी अरेबियाबाट पाकिस्तानलाई ५ अर्ब डलरको सशर्त ऋण दिन तयार भएको बताइएको थियो ।
अब इमरानसंग छैन कुनै मतलब !
पत्रकारले साउदी अरबका राजकुमारको अब इमरानसँग नभई सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवासँग सरोकार रहेको बताएका छन् । बाजवाले सहमति नदिएसम्म उनको तर्फबाट ऋण घोषणा गरिएको थिएन। साउदी अरबले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्दा सामान्यतया तीन–पाँच दिनमा आफ्नो तर्फबाट चेक जारी हुन्छ, तर यसपटक एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र पाकिस्तानको हात खाली छ । साउदी अरबले पाकिस्तानलाई ३ अर्ब डलर नगद भण्डार ९सुरक्षित निक्षेप० र १।२ अर्ब डलरको तेल आपूर्ति सहित कुल ४।२ अर्ब डलर ऋण दिन आग्रह गरेको थियो।
आफ्नै खुट्टामा आफ्नै बञ्चरो हाने !
यस मामिलामा पाकिस्तानले नै आफ्नै खुट्टामा प्रहार गरेका छन् । उनले मलेसिया र टर्कीसँग मिलेर मुस्लिम राष्ट्रको छुट्टै संगठन बनाउन खोजेका थिए । यसैबीच कश्मीर मुद्दामा भारतसँग केही नबोलेपछि उनले साउदी अरेबियाविरुद्ध बयान दिन थाले । जसका कारण साउदी अरब आक्रोशित भएको छ । यो दुई वर्षअघिको कुरा हो, जब पाकिस्तानले यस देशबाट ३ अर्ब डलर ऋण पाएको थियो ९पाकिस्तान साउदी अरब सम्बन्ध०। पाकिस्तानको कारबाही देखेर साउदीले आफ्नो ऋण तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । उनलाई समयावधि पनि दिइएको छैन । जसका कारण पाकिस्तानले मनमानी ब्याजदरमा चीनबाट ऋण लिएर साउदी अरबलाई फिर्ता गरेको थियो । एजेन्सी
Previous articleस्वतन्त्र ताईवानको माङ गर्ने ताईवानी नागरिकलाई चीनमा सुपुर्दिगी गर्दा उनिहरु जीवन संकटमा
Next articleरुसी राष्ट्रपति पुटिन आगामी डिसेम्बरमा भारत भ्रमण गर्दा बिदेश मुद्दामा छलफल